Israa’iil waxay codsaneysaa gargaar iyadoo dab xoog leh oo duurjoog ah uu ka socdo meel ka baxsan Yeruusaalem
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Israa’iil Wararka Jebinaya » Israa’iil waxay codsaneysaa gargaar iyadoo dab xoog leh oo duurjoog ah uu ka socdo meel ka baxsan Yeruusaalem
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Israa’iil Wararka Jebinaya • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Israa’iil ayaa sheegtay inay gargaar gaarsiisay dalal kale oo dhowr ah, iyagoo raadinaya taageero xagga cirka ah si ay ula dagaallamaan dabka.
Dabka oo ah mid aan la xakamayn ayaa baabi'iyey meela kaymo ah iyo dhul beereed
Dabka kaymaha ayaa khatar ku haya tuulooyinka u dhow.
Dabka ayaa kacay Axaddii welina lama xakamayn.
Dabka ka baxsan xakamaynta oo ka socda meel ka baxsan Qudus ayaa ku kaliftay xukuumadda Israa’iil inay dalbato kaalmo caalami ah.
Dab aad u weyn oo duur -joog ah ayaa durbadiiba baabi'iyey kaymo iyo dhul -beereed, isagoo gubay ugu yaraan 4,200 acres (17,000 hektar) oo dhul ah wuxuuna hadda ku hanjabayaa dhowr tuulo oo u dhow.
Ilaa 75 shaqaale dab -damis ah iyo 10 diyaaradood ayaa dabka kula dagaallamayay meel u dhow Yeruusaalem Isniintii, sida ay sheegtay Maamulka Dabka iyo Samatabbixinta ee Israa’iil. Dabka ayaa kacay maalin ka hor walina lama xakamayn.
Muuqaalo laga soo duubay dhulka ayaa muujinaya holac xooggan oo ka baxaya waddooyinka, iyadoo gaadiidleyda ay khasab ku tahay inay baabuur dhex maraan.
Waxaa la arkay diyaarado yar-yar oo u eg sida dalagga oo kale oo ku daadinaya buuraha ku hareeraysan Yeruusaalem xeryahooda dab-damiska oo guduudan oo dhalaalaya si ay u joojiyaan dabka.
Dhowr jaaliyadood oo ku nool aagga ayaa laga qaxay, oo ay ku jiraan guryo ku yaal tuulada Givat Yearim, oo ku taal galbeedka Qudus. Sawirro laga soo qaaday goobta ayaa muujinaya in qaar ka mid ah dhismayaasha ku yaal deegaanka ay durba saameeyeen dabka.
Dabka ayaa sidoo kale halis ku haya isbitaalka ugu weyn dalka, Xarunta Caafimaadka Hadassah, oo ku taal waddada dabka. Booliiska magaalada Qudus ayaa warbaahinta Israa’iil u sheegay inay isbitaalka kala shaqaynayeen sidii ay shaqaalaha uga caawin lahaayeen inay u diyaar garoobaan daad -gureynta. Ilaa fiidnimadii Isniinta, bilaysku wuxuu faray xarunta inay bilawdo nadiifinta baarkinkeeda si loo fududeeyo daadgureynta, inkasta oo aan weli midna lagu dhawaaqin.
Israa'iilWasaaradda arrimaha dibedda ayaa sheegtay inay gargaar gaarsiisay dalal kale oo dhowr ah, iyagoo raadinaya kaalmo degdeg ah oo cirka si loola dagaallamo dabka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Giriigga Nikos Dendias ayaa u sheegay dhiggiisa Israa’iil Yair Lapid in dalku “caawin doono intii karaankiisa ah,” sida ay sheegtay wasaaraddu. Giriigga laftiisa ayaa si aad ah u garaacday dab-bakhtiyeynta wali socota, iyada oo dowladdeeda ay marar badan la kulantay dhaleeceyn ku aaddan jawaabta dowladda ee musiibada.